Qoyska Ikraan Tahliil oo aan ku qancin natiijada baaritaanka ee la soo bandhigay | Dhacdo
Qoyska Ikraan Tahliil oo aan ku qancin natiijada baaritaanka ee la soo bandhigay
Qoyska Ikraan Tahliil Faarax ayaa si adag uga horyimid natiijadii ay xalay maqnaanshaha gabadhooda ka soo saareen Guddigii baarayay kiiskeeda.
Sida uu sheegay Xeer Ilaaliyaha Guud ee Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida, General Cabdullaahi Buulle Kamey oo ka mid ah Guddigii baarayay kiiska Ikraan Tahliil ayaan wax caddeymo ah lagu helin Saraakiisha Hay’adda NISA inay gacantooda ku maqan tahay gabadhaasi.
Ikraan Tahliil oo ka tirsaneyd Hay’adda Nabad Sugidda & Sirdoonka Qaranka (NISA) ayaa la waayay 26-kii bishii June. NISA ayaana 2-dii bishii September sheegtay inay gabadhaasi u gacan-gashay maleeshiyada Al Shabaab, ayna dileen, hase yeeshee Al Shabaab ayaa iska fogeysay eedeyntaasi.
Qaali Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay Ikraan Tahliil ayaa natiijada baaritaankan ku tilmaamay mid aan sax ahayn, oo Madaxda Dowladda Federaalka iyo Saraakiisha NISA ay ka soo shaqeeyeen.
“Waa wax khaldan, waxaan u fadhinayna ma’aha, dadkii aan wax u dhiibanay oo baaritaanka noo haayayna maba ahanba. Waa wax la soo dhoodhoobay, waa wax gacan ku sameys ah oo Farmaajo iyo dadkii gabadheeda dhibaateeyay ee NISA ay ka soo shireen waaye. Wax anaga aan ka aqbalayno iyo wax ummadda Soomaaliyeed ku qanceysana ma’aha, wax bani’aadanimo, Islaamnimo iyo Soomaalinimo ku wanaagsan-na ma’aha.” Ayay tiri Qaali Maxamuud Guhaad oo VOA la hadashay.
Waxay kaloo tiri “Wax ka jiro malahan, waa wax laga soo shaqeeyay oo kaamirooyinkii la soo tirtiray, oo intii gabadhu maqan tahayba laga soo shaqeynayay oo hadda la soo dhoodhoobay. Ummadda caqliga u saaxiibka ahoo ee Soomaaliyeed oo wanaagga, xaqa iyo cadaaladda jecel-na way u jeedaan.”
Su’aal ahayd kalsoonidii aad ku qabtay maxkamadda ma wax baa iska bedelay oo la weydiiyay ayaa ku jawaabtay “Wax baa iska bedelay, aniga Xeer Ilaaliyihii iga qoray dacwadda oo galkaygu ka furnaa maba ahan ninka galabta dhawaaqay.”
Qaali Maxamuud ayaa carro ka muujisay warka guddiga ee sheegaya in NISA ay si wanaagsan ula shaqeysay guddiga, intii ay baaritaankan ku guda jireen, iyadoona tiri “Dadka waa dadkii wax lagu tuhmayay, maxay tahay sababta ay wax u soo baareen, sababta loogu aaminayo maxay tahay, war cadaalad ma jirto, runtan isu sheegaynaa. Somaliya dhibaatada haysato waa cadaalad darro, weligeedna horey uma kaceyso, wax ay qabsaneysana ma jirto, dalkan iyo dadkan Ilaahaygii raxmaanka ahaa khayr ha u keeno.”
Waxay intaa ku dartay “Ummadda waa dhibaateysan tahay, maxaa yeelay nimankii aniga gabadhayda dhibaateeyay ayaa la leeyahay wax bay baarayaan, wax ka jiro maleh, waa meel la isugu xoog sheegto. Ilaahay (SWT) xooggiisa ha tuso.”
Mar wax laga weydiiyay inay weli ku kalsoon tahay Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo in kale ayaa sheegtay inay weli kalsooni ku qabto, ayna uga fadhiso
“Kalsoonidaydii waan ku qabaa weli, weli waan ku qabaa Ra’iisal Wasaaraha kalsoonidaydii, waana ka sugayaa, waana uga fadhiyaa.” Ayay tiri Qaali Maxamuud.
Ugu dambayn Culimada Soomaaliyeed ayay ku eedeysay inay ka hadli la’yihiin maqnaanshaha gabadheeda, xilli qoyskeeda ay la dhibaateysan yihiin maqnaanshaheeda.
“Culimada Soomaaliyeed, dhibaatada gabadhaydii yarta ahayd ee masaakiinta ahayd ay maanta u shirqoolan tahay, una dhibaateysan tahay way ka soo hadli la’yihiin. Maanta dhibaa jiro, maxay culimo ka yihiin, culimada adduunka joogto ee Soomaaliyeed, afkayga taqaano.” Ayay tiri Qaali Maxamuud.